4 गतिविधिहरु शरद मा आउटडोर मा गर्न को लागी बेजिया
4 गतिविधिहरु शरद मा आउटडोर मा गर्न को लागी
मारिया vazquez | 01/09/2021 10:00 | अद्यावधिक गरियो 29/08/2021 23:45 | आराम
शरद itतु यसको साथ कम तापमान तर अझै पनी सुखद बाहिरी गतिविधिहरु को आनन्द लिन्छ। होइन किनकि पतन आउँछ हामीले यी त्याग्नु पर्छ र आफैंलाई घरमा बन्द गर्नु पर्छ। त्यहाँ असंख्य छन् शरद inतु मा गर्न को लागी गतिविधिहरु कि हामीलाई वर्ष को यस समय को विलक्षणता को आनन्द लिन को लागी अनुमति दिन्छ।
हामी धेरै योजनाहरु को बारे मा सोच्न सक्छौं कि हामी बर्ष भर मा पूरा गर्न सक्छौं शरद theyतु मा उनीहरु को एक विशेष रंग छ. चाहे कम्पनीमा होस् वा एक्लै, बाहिरी खेल को प्रेमीहरु यस समय मा अद्वितीय परिदृश्य को आनन्द उठाउन सक्षम हुनेछन्। तर त्यहाँ अन्य धेरै आराम गतिविधिहरु छन् कि तपाइँ एक धेरै रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ।
1 प्राकृतिक पार्कहरु को माध्यम बाट पैदल यात्रा
2 ग्रीनवे मार्फत बाइक मार्गहरु
3 मशरूम को लागी
प्राकृतिक पार्कहरु को माध्यम बाट पैदल यात्रा
शरद usतु हामीलाई मनमोहक परिदृश्य दिन्छ र त्यो यो आदर्श समय हाम्रो देश मा धेरै प्राकृतिक पार्कहरु मध्ये एक को भ्रमण गर्न को लागी बनाउँछ। यो पनि हामीलाई बिभिन्न मार्गहरु प्रदान गर्दछ त्यसैले यो गाह्रो छैन समूह को विशेषताहरु को लागी हिड्ने अनुकूलन।
के तपाइँ केहि विचारहरु को आवश्यकता छ? त्यहाँ धेरै छन् प्राकृतिक पार्कहरू जुन शरद inतु मा विशेष गरी सुन्दर देखिन्छ: Pontevedra मा Fraga de Catasós, बास्क देश मा Gorbeia, Navarra मा Urbasa, Asturias मा Somiedo, León मा Picos de Europa, Catalonia मा Montseny, Zamora मा Arribes डेल Duero र Salamanca, Cazorla, Segura र लास Ja inn मा भिल्ला, ग्रेनाडा मा सिएरा नेभाडा ....
यदि तपाइँ बच्चाहरु संग जानुहुन्छ तपाइँ शरद leavesतु पातहरु स collecting्कलन को रूप मा सरल केहि गरेर, उनीहरुको पत्ते को टोन द्वारा वर्गीकृत गरी हिड्न को लागी रमाईलो बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन शरद inतु मा हरियो बाट पहेंलो र रातो मा सार्नेछ। पछि, तपाइँ सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र जाडोमा बिभिन्न शिल्प बनाउन को लागी एक घर का बनाएको प्रेस मा उनीहरुलाई सुखार्न सक्नुहुन्छ।
ग्रीनवे मार्फत बाइक मार्गहरु
पहेँलो र गेरू पत्ते को परिवर्तन संग, त्यहाँ greenways कि शरद transतु मा परिवर्तन छन्। र किन उनीहरुलाई बाइक द्वारा पुन: पत्ता लगाउने छैन? उनीहरु भन्छन् कि बाइक गर्मी को लागी हो तर शरद temperaturesतु तापमान धेरै धेरै रमाईलो छन् यो शौक को आनन्द लिन को लागी, तपाइँ सहमत हुनुहुन्न?
स्पेनमा त्यहाँ छन् २ हजार किलोमिटर ग्रीनवे, उनीहरुको ठूलो बहुमत पुरानो भत्काइएको रेल मार्गहरु मा पत्ता लगाईयो। उनीहरु पुराना मार्गहरु को मार्ग पछ्याउन को रूप मा, ती मध्ये धेरै जसो सपाट छन्, तेसैले उनीहरु सम्पूर्ण परिवार को लागी रमाईलो पैदल यात्रा हो।
ला रियोजा र बुर्गोस को बीच सिएरा डे ला डिमान्डा ग्रीनवे, Navarra मा प्लाजाओला ग्रीनवे, Carrilet ग्रीनवे कि ला Garrotxa को ज्वालामुखी क्षेत्र को घाटी पार, Asturias मा Oso ग्रीनवे र Cáceres मा Monfragüe को ग्रीनवे, मात्र केहि प्रस्तावहरु हुन् ।
मशरूम को लागी
शरद तु को आगमन संग, स्पेन मा च्याउ को मौसम शुरू हुन्छ। वर्षको यो समयमा उनीहरु स्कलन गर्न सकिन्छ boletus, morels, chanterelles, chanterelles, मृत्यु को तुरही ... केहि रुख को आधार मा हुर्कन्छन्, जबकि अन्य विघटन को प्रक्रिया मा काठ मा बढ्छन्।
मशरूम को लागी खोज, स collecting्कलन र उनीहरुलाई पकाउने एक महान तरिका बाहिर समय खर्च गर्न को लागी हो। एक गतिविधिहरु को शरद doतु मा गर्न को लागी कि तपाइँ एक्लै वा प्रकृति को कम्पनी मा रमाईलो गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यो मा शुरू गर्नु अघि, तथापि, यो छ विभिन्न प्रजातिहरु जान्न को लागी महत्वपूर्ण छ र थाहा पाउन को लागी जो विषाक्त छन् र जो खाना योग्य छन्।
त्यहाँ कवक र धेरै प्रकार छन् कोहि निल्यो भने घातक हुन सक्छ, तेसैले कसैको साथ शुरू गरीरहेको छ जो विषय मा एक विशेषज्ञ हो धेरै मद्दत को हुन सक्छ। आवश्यक जान्नुहोस् र त्यसपछि मौसमी च्याउ स collect्कलन गर्न र उनीहरुलाई सजीलै उपभोग गर्न को लागी प्रशिक्षण बन्द नगर्नुहोस्।
के तपाइँसँग बगैचा छ? वर्षको यो समय को विशिष्ट कार्यहरु को आनन्द लिनुहोस्। कुनै रोगी बिरुवा वा बिरुवा सामग्री हटाउनुहोस् कीट र रोग को प्रसार लाई रोक्न। पछि, छाँटो conifers र सदाबहार र जैविक कम्पोस्ट लागू गर्नुहोस्।
वर्षको यो समय पनि बिरुवा को लागी आदर्श हो ट्यूलिप, जलकुंभी वा ड्याफोडिल बल्ब। गिरावट बल्ब र वार्षिक वसन्त मा खिलने को लागी, तपाइँ पतन मा रोप्नु पर्छ। तपाइँ पनि मौसमी फूलहरु जस्तै गुलदाउदी, pansies वा हीथर कि बगैचा सुशोभित गर्न सक्नुहुन्छ
हो, अर्कोतर्फ, तपाइँ बागवानी सुरु गर्न चाहानुहुन्छयस समयमा तपाइँ अजवाइन, प्याज, ब्रोकोली, parsnip, गाजर वा पालक, साथ साथै भ्यालेरियन, रोजमेरी, थाइम वा अजमोद जस्ता सुगन्धित जडी बूटी रोप्न सक्नुहुन्छ।
शरद inतु मा गर्न को लागी यी गतिविधिहरु मध्ये कुन तपाइँको ध्यान सबैभन्दा कैच गर्दछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » आराम »4गतिविधिहरु शरद मा आउटडोर मा गर्न को लागी
कास्केड चोटी: यो कसरी एक साधारण तरीका मा गर्न को लागी पत्ता लगाउनुहोस्!